Daawada Taranka ee Columbus, OH | Caafimaadka PW
Daawada Taranka ee Columbus, OH
Waa maxay Daawada Taranku?
Markii aad go'aansatay inaad qoys samaysato, waxaa laga yaabaa inaad u malaysay inaad dhowaan uur yeelan doonto. La -yaabka madhalaysnimadu waxay keentaa walaac iyo xitaa cabsi. Waxaa laga yaabaa inaad dareento go'doon markaad wajahayso madhalaysnimo, haddana keligaa ma tihid. Xirfadlayaasha Caafimaadka Dumarka ayaa ka caawiyay lamaane badan inay ka gudbaan xaaladdan. Maaddadani waxay ka tarjumaysaa qaar ka mid ah waayo -aragnimadayada go'aaminta iyo daweynta sababaha jireed ee dhalmo la'aanta, taas oo na siisay faham si ay kaaga caawiso inaad wax ka qabato dareenka aad la kulanto. La xiriir xafiiskayaga Columbus, OH, maanta si aad ballan ula samaysato xubin ka tirsan shaqaalahayaga khibrada leh.
Miyaan u Baahanahay Daaweyn Taran?
14% lamaanayaasha da'doodu u dhaxayso 15 ilaa 44 ee raba inay ilmo dhalaan waa madhalays. Dumarka, dhalmo la'aanta ayaa ku badata da'da, iyadoo qiyaastii 25% dumarka ka weyn 35 ay la kulmaan dhibaatooyin madhalaysnimo. Waxaad u baahan tahay inaad la tashato bixiye haddii aad galmo samaysay laba ama saddex jeer toddobaadkii agagaarka wakhtiga ugxantu bil kasta ugu yaraan hal sano oo aan uur lahayn. In kasta oo aad weli uur yeelan karto kaalmo caafimaad la'aan, haddana fursadaha arrintaas ayaa sii yaraanaysa. Caawimaadda caafimaadku waxay samayn kartaa farqiga oo dhan.
Waxay waxtar leedahay marka lammaanayaashu wadajir u raadsadaan caawimo oo ay fahmaan daaweynta la heli karo. 40% kiisaska, labku dhibaato ayuu qabaa. 40% kale, waa dheddig, iyo 20% kiisaska, labada lamaane ayaa dhibaatooyin qaba. Lammaaneyaal badan ayaa leh wax ka badan hal sabab oo madhalaysnimo ah. Si kastaba ha ahaatee, xaaladaha qaarkood, lama garan karo wax sabab ah, xitaa ka dib baadhitaan ballaaran. Si kastaba xaalku ha ahaadee waxaa soo ifbaxaya arrimo caadifadeed. Ragga iyo dumarkuba waxay u baahan yihiin jacaylka iyo taageerada qoyskooda iyo kuwa kale ee muhiimka ah.
Sidee lagu ogaadaa madhalaysnimada?
Falanqaynta shahwada ayaa la samayn karaa wakhti kasta. Waxaad heli doontaa tilmaamo iyo koob ururinta shahwada, oo shaybaarku markaas qiimeeyo.
Adiga ayaa mas'uul ka noqon doona wicitaanka shirkaddaada caymiska si aad u xaqiijiso xarunta ay dabooli doonaan falanqaynta shahwada.
Shaqada hore ee dhiigga ayaa laga yaabaa in la sameeyo si loo qiimeeyo qanjirkaaga iyo qanjirka pituitary. Hysterosalpingogram (HSG) waa raajo tuubbooyinka fallopian iyo ilmo-galeenka lagu sameeyo waaxda shucaaca ee isbitaal. Baaritaanka, oo la sameeyo dhammaadka wareegga caadada, ayaa bixiya macluumaad ku saabsan xaaladda tuubooyinka fallopian iyo dusha ilma -galeenka. Fadlan wac xafiiska maalinta ugu horeysa ee dhiigbaxa si aad u ballansato baaritaankaan. Noo sheeg haddii caymiskaagu qeexayo isbitaallada aad isticmaali karto. Kalkaalisada xafiiskayaga ayaa kuu ballansan imtixaanka. Bukaan-socodka badankoodu waxay la kulmaan waxoogaa raaxo-darro ah baaritaankaan, kaas oo laga yareeyn karo qaadashada dawooyinka aan steroid ahayn, ka-hortagga bararka sida Advil® qalliinka ka hor.
Waxaad u baahan doontaa inaad iibsato xirmada saadaasha ugxanta si aad u ogaato ugxanta. Tilmaamaha waxay ku lifaaqan yihiin xirmada. Adigoo adeegsanaya xirmada ugxameynta si habboon, waxaad taqaanaa marka jirkaagu yeesho LH -ga oo kacsan, taas oo macnaheedu yahay in ugxantu ay u badan tahay inay ku dhacdo 24 illaa 36 saacadood ee soo socda. Waqtiga inta ka dhiman qiimeynta dhalmo la’aantu waxay ku xiran tahay maalinta qalliinka LH, markaa waxaad u baahan tahay inaad wacdo xafiisyadeena maalintaas si aad u ballansato inta ka hartay shaqadaada. Haddii baaritaanku ku guuldareysto inuu muujiyo qalliin LH, macluumaadkan waxtarka leh waa in la soo sheegaa.
Baaritaanka progesterone serum waa baaritaan dhiig oo la sameeyo toddoba maalmood ka dib qalliinka LH. Waxaa loo isticmaalaa in lagu qiimeeyo tayada ugxanta. Baaritaankaan waxaa la qorsheeyay markaad wacdo si aad u soo sheegto qalliinka LH. Kalkaaliso ayaa dhiig jiidata, markaa uma baahnid inaad u tagto bixiyahaaga baaritaankaan.
Sidee Dhalmo La'aanta Loogu Daweyn Karaa Daawada Taranka?
Ragga waxaa laga yaabaa inay qabaan dhibaato shahwo, sida tirinta shahwada oo hooseysa, shahwo leh dhaqdhaqaaqii shahwada ee caadiga ahaa, ama qaab aan caadi ahayn oo shahwada ah. Daawooyin yar ayaa la heli karaa si kor loogu qaado tirada shahwada, laakiin uurka guuleysta badiyaa weli waa la gaari karaa. Dhaqdhaqaaqa shahwada waxaa laga yaabaa in lagu wanaajiyo daawada, qalliinka, ama farsamooyinka gaarka ah ee diyaarinta shahwada. Xirfadlayaasha Caafimaadka Dumarka ayaa sidoo kale kuu gudbin kara bixiyeyaasha bacriminta fiitamiinka (IVF) iyo hababka wareejinta intra-fallopian (GIFT).
Dheddigga, dhanka kale, badiyaa waxay la kulmaan laba dhibaato midkood. Ugu horreyn, ugxamaynta aan caadiga ahayn waxay noqon kartaa natiijada dheelitir la'aanta hormoonnada waxayna caadiyan keentaa caado aan caadi ahayn. Dhibaatooyinka ugxantu waxay sidoo kale la xiriiraan miisaanka jirka oo hooseeya, cayilnaanta ama miisaanka oo yaraada ama korodhka, iyo sidoo kale sababaha kale. Daaweynta ugxanta aan caadiga ahayn waxay noqon kartaa mid fudud ama ka badan oo ku lug leh, oo u baahan takhasusle.
Dhibaatada labaad ee iman karta, ee la xannibay tuubooyinka fallopian, waxay faragalin ku yeelan kartaa ukunta iyo shahwada midaynta ama kobcinta uurjiifka habboon iyo gelinta ilma galeenka. Dhaawaca tubada ayaa dhici karta ka dib infekshanka miskaha oo ka dhasha IUD ama bakteeriya, sida kalamiidiya, mycoplasma, ama jabtada. Bukaanku waxaa laga yaabaa inuusan la kulmin wax calaamado caabuq ah oo laga yaabo inuusan garanayn dhibaatada ilaa qiimeynta dhalmo la aanta la sameeyo. Raajada tuubbooyinka-oo loo yaqaan hysterosalpingogram-iyo laparoscopy-ga ogaanshaha ayaa laga yaabaa in loo isticmaalo si loo ogaado dhibaatada. Daaweyntu waxay badanaa u baahan tahay qalliin khaas ah.
Caymiskaygu ma dabooli doonaa Daawada Taranka?
Waxaad ubaahantahay inaad laxiriirto shirkadaada caymiska kahor intaan laga shaqeynin wax dhalmo la'aan ah si loo ogaado caymiskaaga. Nasiib darrose, shirkado badan oo caymis ah ayaan wax lacag ah ka bixin wax baaritaan ah ama daaweyn ah. Shirkado badan oo caymis ayaa sidoo kale u baahan kara gudbin, oggolaansho hore, ama isbitaal gaar ah iyo sheybaar si loo baaro. Fadlan ka hubi shirkaddaada caymiska si aad uga warqabto caymiskaaga.
Bilow Qoyskaaga Maanta
Iyada oo la adeegsanayo daawada taranka, kooxda kartida leh ee Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka ayaa inta badan awood u leh inay bukaan -socodkayada siiyaan qoysaska riyooyinkooda. Haddii adiga ama lammaanahaagu aad ku guuleysan weydeen raadintaadii aad ku doonaysay inaad uuraysato, tixgeli inaad qaadato daaweynta dhalmo la'aanta si loo garto dhibaatada. Wac xaruntayada Columbus, OH, maanta si aad u ballamiso wadatashigaaga oo aad qaaddo tallaabada ugu horreysa ee noqoshada waalid cusub.